ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း မူရှာရက်ဖ် အပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ သေဒဏ်အမိန့်ကို ပယ်ဖျက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း မူရှာရက်ဖ် အပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ သေဒဏ်အမိန့်ကို ပယ်ဖျက်
Pervez Musharraf, Pakistan's former president, speaks fromahospital bed in Dubai, United Arab Emirates December 18, 2019 in this still image taken from video. All Pakistan Muslim League (APML) Handout/Reuters TV via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. FOR REUTERS CUSTOMERS ONLY.
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း မူရှာရက်ဖ် အပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ သေဒဏ်အမိန့်ကို ပယ်ဖျက်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ပါဗက် မူရှာရက်ဖ် အပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ သေဒဏ်အမိန့်ကို ပါကစ္စတန်တရားရုံးက ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ လာဟိုးမြို့ အဆင်မြင့်တရားရုံးက မူရှာရက်ဖ်ကို သေဒဏ်အမိန့်ချခဲ့တဲ့ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်မှု မရှိကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အထူးတရားရုံးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း မူရှာရက်ဖ်ကို နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အလွှဲသုံးစားမှု စွဲချက်အတွက် သေဒဏ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
မူရှာရကဖြဟြာ ပှီးခဲ့တဲ့ နှဈပေါငြး ၂၀ ကွောကြ ပါကဈစတနနြိုငငြံရဲ့ စဈအာဏာသိမြး ခေါငြးဆောငတြဈဦး ဖှဈသလို ပါကဈစတနြ သမျမတအဖှဈ ၂၀၀၁ ခုနှဈကနေ ၂၀၀၈ ခုနှဈအထိ တာဝနယြူခဲ့သူ ဖှဈပါတယြ။ မူရှာရကဖြဟြာ ဆေးကုဖို့ ထှကခြှာသှားတဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှဈကတညြးက ပှညပြှေးဖှဈနပှေီး ဒူဘိုငြးမှို့မှာ လကရြှိနထေိုငနြပေါတယြ။
ဗိုလျခြုပျကွီးဟောငျး မူရှာရကျဖျ အပေါျ ခမြှတျထားတဲ့ သဒေဏျအမိနျ့ကို ပယျဖကြျ
မူရှာရက်ဖ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ စစ်အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သလို ပါကစ္စတန် သမ္မတအဖြစ် ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ မူရှာရက်ဖ်ဟာ ဆေးကုဖို့ ထွက်ခွာသွားတဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက ပြည်ပြေးဖြစ်နေပြီး ဒူဘိုင်းမြို့မှာ လက်ရှိနေထိုင်နေပါတယ်။
Previous articleရှာကွီရီအတွက် ရိုးမားရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ပယ်ချလိုက်တဲ့ လီဗာပူး
Next articleနိုင်ငံရေးပါတီ ညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့က နုတ်ထွက်ဖို့ တောင်းဆိုလာရင် ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးက နုတ်ထွက်မယ်လို့ မဟာသီယာ ပြော